Kudar Icon Twitter ah Blog-kaaga | Martech Zone
Kudar Icon Twitter-ka Bloggaaga
Saturday, May 10, 2008 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waqti badan kuma qaato sida aan jeclaan lahaa inaan ku galo Twitter-ka, laakiin dhab ahaantii waxay isu asaastay inay tahay qalab weyn - leh adeegsiyo badan oo kala duwan. Mid ka mid ah adeegsigaas aniga ayaa adeegsanaya si aan ugu dhawaaqo qoraalladayda si otomaatig ah sidaa darteed mid kasta oo ka mid ah kuwa raacsan ayaa ogaanaya markii aan ku daabacay boggeyga. Waa mid otomaatig ah iyada oo la adeegsanayo Qalabka Cusbooneysiinta ee Twitter ee loogu talagalay WordPress.
Waxay noqotay mid guud oo aan go'aansaday inaan ku daro ururinta Quudinta, Email iyo moobiilka moobiilka dhinaca bidix. Isku day sidii aan u heli lahaa astaan, in kasta oo aanan la kulmin wax shabaqa ah. Marka - Waxaan go aansaday inaan iska yeesho:
Doono si xor ah soo dejiso dhammaan astaamaha Twitter iyo xitaa feylka Sawirka waxaan u isticmaali jiray iyaga. Maaddaama aanan ahayn farshaxan garaaf ah, waxba kama qabo meesha iyo sida aad u isticmaaleyso ama haddii aad horumariso. Waxaan rajeynayaa, Twitter sidoo kale ma!
Adigu iska leh T-Shirt Twitter, Sidoo kale!
Tags: astaanta twitterSawirqaade twitter
Soo dejiso barnaamijkan aan u dhisnay si aan u hagaajino barnaamijkeenna?
Shaqo wacan! Aad u deeqsi ah in sidan oo kale loo wadaago…
Mahadsanid! Wax madadaalo ah maahan inaad alaabtaan naftaada u haysatid, Steve!
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida astaamahan. Waxay ahaayeen wixii aan raadinayay si aan uga beddelo 'Sanduuqyada' Twitter-ka 'ee aan ilaa hadda adeegsanayay.
Waxaan kudarsaday astaan ​​horeyba ugu jirtay barta mid kamid ah qoraaladayda weyna fiicantahay.
Waxaan hada kudarey pluginkan oo aan ka ahayn xasuusinta cinwaankayga e-mayl ee aan ku diiwaan galiyay koontadayda twitter-ka (doh!) Waxay u shaqaysay sidii dawayn mar aan saxay midig. Mahadsanid.
Jacaylka astaanta! Ayaa garanaya, laga yaabee inaad abuurtay astaanta cusub ee Twitter. Waa inaan fiiriyaa haddii aan ku soo jiidan karo boggan cusub kahor intaan la bilaabin dabayaaqada toddobaadkan.
Jacaylka astaamaha, waad ku mahadsan tahay wadaagiddooda.
Agoosto 14, 2008 saacaddu markay ahayd 10:27 PM
Mahadsanid astaanta. Waxaan u isticmaalayaa on my site!
Sep 1, 2008 at 1: 21 PM
Doug, ma qaadatay kiniin kaamil ah mise wax? Cuz kani waa KELIYA. Waxaan ka fekerayay uun inaan ku daro Twitter-ka boggeyga gaarka ah iyo mareegteyda naqshadeynta websaydhka. Iyo BAM, waa kuwan!
Mar labaad, sida qalabkaaga Foomka Xiriirka, oo ah qalab aad u fiican oo aad u faa'iido badan.
Sep 1, 2008 at 1: 58 PM
Mahadsanid Joni! Aad baad u naxariis badan tahay
Sep 29, 2008 at 8: 41 PM
Wow, kaamil ah! Kaliya waan Google googled si aan uhelo astaan ​​wanaagsan oo twitter ah kadib markaan joojiyay raadinta wax twitter-ka. Shaqo fiican, tanna waxaan ugu isticmaali doonaa meelo dhowr ah maadaama aan haysto dhowr goobood.
Waad ku mahadsan tahay wax badan!
21, 2008 at 12: 18 AM
Waad ku mahadsan tahay dalabkan deeqsinimada leh. Waxaan ku hirgeliyay khariidada sawirka boggeyga wuxuuna u shaqeeyaa sidii soojiidasho.
Feb 28, 2009 markay ahayd 6:49 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagista. Waxaan u adeegsaday astaanta twitter-ka muuqaalkeyga LiveJournal.
Mahadsanid, Doug. Hadda waxaan ka bilaabayaa degel Blogger waxaanan raadinayay astaan ​​Twitter qabow, boggan wuxuu ku yimid xagga sare natiijooyinka. Mahadsanid, markale, waadna hubsan kartaa inaan joogto ku noqon doono halkan, degelkani waa meel lagu keydiyo macluumaad iyo ilo.
Waad ku mahadsantahay sawirada twitter-ka - 50 x 50 ayaa si sharaf leh hada loo soo bandhigayaa.
Mar 18, 2009 at 5: 02 PM
waad ku mahadsantahay isticmaalka astaamahaaga.
waxaan ku jiraa twiter aswell.
barashada bilaabida boggeyga.
la xiriir si aad u cusbooneysiiso halka ay astaantaadu ka muuqan doonto.
mar labaad mahadsanid.
Waad ku mahadsantahay sameynta astaamahan Twitter-ka ah oo la heli karo. Waxaan kaliya ku dhajiyay mid ka mid ah bloggeyga.